Blockchain News 10 Ndira 2018 - Blockchain News
Ndira 10, 2018 arun
Blockchain News 10 Ndira 2018
Metatron anosunungura cryptocurrency mutengapwe papuratifomu
Metatron, mumwe Michina piyona kushandisa iri nokukurumidza kusunungurwa pamusoro 2000 Apps ndiyo kukuzivisai kusunungurwa BitMeet ™, mumwe cryptocurrency kutengeserana akavaverengera mutengo Tracking uye nzvimbo mabasa iripo zvino Google Play.
Bitmeet ™ 's zvinhu zvinosanganisira dzevakurukuri, nzvimbo vanoshandisa vanoda kutenga uye kutengesa cryptocurrency, Pricing, musika chivharo, nhau uye zvakawanda. Available zvino Google Play, Tingatarisira kuti kusunungurwa iOS mano mune ramangwana.
"Cryptocurrency kuchikuva Our Bitmeet ™ kuchabatsira kurwira vakawanda kubva nezvisungo centralized Fiat rwezvemabhengi, kusika rudzi rutsva nevatengi pedyo uye kwaita misika makuru kwechokwadi kwakavakirwa pamwero munhandare,"Akadaro Metatron CEO Joe Riehl.
Direxion, ProShares, VanEck ngavabude Bitcoin ETF mafufu
Direxion, ProShares uye VanEck pakati tsama ETF issuers kuti vakatsausa mafufu kuti vomurova bitcoin ETFs akumbirwa U.S. regulators.
On kufanana chitsamba, The SEC anotsvaka mazano pamusoro aronga mitemo kuchinja nokuda Chicago Board Options Exchange (CBOE) vaigona kubvumira exchange kunyora kusvika mana bitcoin ETFs. Cboe aiva wokutanga mukutsinhana opareta muna U.S. kusuma neramangwana inobva digitaalinen mari, vaita mwedzi saka okupedzisira.
Saka kure, hapana Exchange mhindu zvigadzirwa chokuita digitaalinen dzeEurope kunge aifarirwa U.S. regulators.
Goldman Sachs: In Nemuromo Bitcoin kungava chepamutemo muchimiro mari
Bitcoin anogona kuva pamutemo uye kwakapararira chimiro mari asi zvikurukuru dzidziso, nokuti ikozvino, maererano Goldman Sachs Nyanzvi dzezvehondo.
“Kushandiswa kwakapararira pamusoro dhora kunze US - uye azere dollarization mune dzimwe nyika - zvinoratidza pane kare zvinoda kuti pose akabvuma unosvikirwa zvokutsinhanisa uye dura ukoshi,” akati Goldman raMwari Zach Pandl uye Charles Himmelberg mune katsamba neChitatu.
Munyika idzodzo uye makona mari ino apo tsika mabasa mari vari inadequately kusvitsa, bitcoin (uye cryptocurrencies zvakawanda kazhinji) anogona kupa zvimwe zvingashandiswa.
Semuyenzaniso, bitcoin Exchange Mavhoriyamu yakadirana mu China mushure nyika yakatanga clamping pasi guta inofashukira mu 2016.
Mupfungwa iyoyo, pane kudiwa bitcoin sezvo muchimiro mari kuti kwema. Asi sezvo chikamu mari Portfolio, cryptocurrencies vari “zvikuru nechokwadi chaiwo dzokufungidzira sefuro,” ari Nyanzvi dzezvehondo vakati. Vakaona kuti Korea uye Japan nesimba bitcoin Exchange mavhoriyamu, asi tiri nyika ine kugadzikana mari gadziriro.
Chokwadi ndechokuti cryptocurrencies tichiri yakakwirira pamutemo bhaa kubvisa munzvimbo dzakawanda, ari Nyanzvi dzezvehondo vakati. Kutanga, hurumende haagoni chamber ari kubhadhara kana kugamuchira digitaalinen dzeEurope.
Goldman Sachs ari anonzi kugadzirira cryptocurrency wokutengesera dhesiki.
mafuta kunotsigirwa cryptocurrency Maduro raMwari arambwa Venezuela kuti paramende
Venezuela kuti kupikiswa-mhanya Paramende Chipiri kurambidzwa munhu "Petro" cryptocurrency anosimudzirwa mugovanisi President Nicolas Maduro, kuchipa Achiedza zvisiri pamutemo Mortgage reserves mafuta mari-akasungirirawo yenyika.
Maduro neChishanu akati hurumende yake kuti ngaateme anenge $6 bhiriyoni Petros senzira kusimudza zvakaoma mari uye kuti kunzvenga zvirango zvemari rinorambidzwa ne Washington.
Cryptocurrency nyanzvi dzinoti Venezuela kuti kusagona wayo upfumi, pamwe risingakanganwiki kwokusaremekedza mutongo Socialist Party nokuda chaiyo kodzero, Pamwe achasiya vanoita nezviri kuwana Petros.
"Uyu haasi cryptocurrency, ichi chinhu mberi kutengesa mafuta Venezuelan,"Akadaro muparamende Jorge Millan. "Hazvina Zvakagadzirirwa uori."
Maduro ave kwava kuteerera Paramende kubva bato rake rakarasika anoridzora mu 2016, uye aifarira-hurumende Supreme Court kupfurwa pasi zvinenge chiyero ose akapfuura kubva ipapo.
Maduro anovimba rive muripo nomazviri dzimwe bhizimisi uye kusaita kubhadhara sokunonoka kuti akawedzera chakasimba sezvo zvirango vakaenda kunzvimbo.
Fund Trat raMwari Tom Lee: Bitcoin nyore kaviri muna 2018
Mumwe Wall Street kuti zvikuru bitcoin nzombe anodaro cryptocurrency aigona “nyore kaviri” kana kunyange katatu muna 2018.
“Kunyange uri mukana unhu hwaro, Ndinofunga bitcoin ari kuenda outperform ari S nyore&P,” Lee akati Chipiri pamusoro CNBC raMwari “Neramangwana Now.” “On a-refu, nyore nzira kutarisa bitcoin kwakafanana yokutsiva kana muchitoro kuti ukoshi,” akati. “Saka sezvo millennials vanoona uye vaunze mari, vari kuenda kurishandisa somunhu wokutsiva goridhe.”
“Kana bitcoin anowana 5 muzana musika goridhe, kuti nehasha $ 50,000,” Akatizve. Ndicho chinhu kupfuura 200 muzana famba kubva apo bitcoin pari wokutengesera.
On a pedo-refu, Lee anotarisira bitcoin kuzotora raro December yakakwirira. “Tinofunga kuti mid-2018, tava kuva chikamu nzira ikoko, uye ndicho chikonzero isu tiwane [bitcoin kuti $20,000],” akati. “Kana bitcoin anogona chaizvoizvo simuka pedyo kuti $20,000 dhigiri rokutanga hafu gore rino, Ndinofunga ari yechipiri yezana 2018, tichazoona kutama huru kupfuura,” Lee akati. “Saka ndinofunga bitcoin ichiri chinhu unofanira dzavo gore rose.”
Previous Post:Ndiani akaita chikuru mupiro kuna crypto indasitiri? pamusoro 7
Next Post:Blockchain News 11 Ndira 2018